Accueil > Gazetin'ny nosy > Colonel Charles Andrianasoavina: Voafidy ho filohan’ny Fikambanana Zanaka Anteony
Colonel Charles Andrianasoavina: Voafidy ho filohan’ny Fikambanana Zanaka Anteony
Tamin’ny alahady 14 janoary 2018 no natao tao amin’ny CTM (Collège technique mixte) Ampefiloha ny fifidianana izay ho filohan’ny FIZA (Fikambanan’ny Zanaka Anteony) eto Antananarivo. Fikambanana mampiray ny tarana-dRamakararo izay ampanjaka namorona ny fanjakana voalohany indrindra teto Madagasikara ny taona 1337 tao Vohipeno.
Tamin’ny taona 1504 no nanorina ny fanjakana tao Ivato Fenovola Vohipeno ny ampanjaka zafikelin-dRamakararo antsoina hoe Andriamarohala na Ramarohala. Ny taranak’ity ampajaka ity no antsoina hoe Anteony. Misy 12 mirahalahy ny zanak’ity ampanjaka ity izay antsoina hoe Anteony. Dia ireto avy: Rambo no lahimatoa izay mipetraka ao Ankily-Vohitramba ary nanorina ny fanjakana tao Ikongo izay antsoina
hoe Zafirambo ny taranany. Manaraka azy Ndrekazomammbo, Ndremandia, Randrasambo, Ndrekofoky, Ndretomambe izay ny taranany no mitondra ny lapa Fenovola Ivato amin’izao fotoana izao ka misy ny ampanjaka Ndrenony Ramasitrakarivo Martin Gerard ankehitriny. Manaraka azy dia Ndrekatibofotsy, Ramarofaho, Andriamivato, Ndrembary, Ndretombato, ary Ndretomamasay no faralahy. Marihina fa samy misy ampanjaka avokoa ireo foko sy tanàna misy ny taranaka ny 12 lahy ireo izay antsoina hoe Ampanjaka Randriambe no mitantana izany.
Ny Colonel Charles Andrianasoavina no lany tamin’ny fifidianana izay ho filohan’ny fikambanana avy amin’io foko Anteony Antemoro io eto Antananarivo ao anatin’ny efa-taona indray nisolo an’i Brice Randrianasolo. Ny Colonel Charles Andrianasoavina dia tsy zoviana amin’ny maro intsony satria nanana toerana lehibe teto amin’ny firenena tamin’ny fitondrana Tetezamita 2009-2014 iny. Lany tamin’ny isa 119 izy raha toa ka 49 ny capitaine Thomas izay nifaninana taminy. Ny mpikambana maro tao amin’ny Fiza no nametraka ny fitokisana amin’i Colonel Charles Andrianasoavina izao ary mirary fampiroboroboana ity fikambanana ity.
Marihina fa misy zanaka fikambanana 20 mahery ny fikambanana misy amin’ny Antemoro izay mikambana ao amin’ny FIANTA (Fiarahan’ny zanaka Antemoro eto Antananarivo) izay Randrianasoavina Emilien Christian no filohany amin’izao fotoana izao.
Miely patrana manerana an’ny Madagasikara ny Fiza, ary avy amin’i Ndrekazomambo no nipoiran’ny ampanjaka tao Ambositra antsoina hoe Zanakompanalina sy ampanjaka nifehy an’Ambatofinandrahana antsoina hoe Andriamaopanalina na Ralainariana. Ny rahalahiny no nitondra ny tao Fandriana-Fisakana nantsoina hoe Ratrimo ary ny anabaviny tao Imito nantsoina hoe Renosy.
Mirary soa ho an’ity filoha ity ny mpikambana rehetra.